''ရစေိမျခြိုးခွငျးဟာ သငျ့ကိုဘယျလို အကြိုးပေးမယျဆိုတာ'' - SANTHITSA
သငျသိပွီးပွီလား? သငျရခြေိုးတဲ့အခါ ရကေိုစိမျပွီး ခြိုးခဲ့မယျဆိုရငျ အံသွဖှယျကောငျးတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှေ ရနိုငျမယျဆိုတာ။ ပငျပနျးနှမျးနယျ နခြေိနျမှာ ရစေိမျကနျထဲမှာ ရစေိမျခြိုးတာဟာ ပငျပနျးမှုကို ပွလြေော့စပွေီး စိတျကို လနျးဆနျး သှားစနေိုငျပါတယျ။
ခြိုးမဲ့ရထေဲမှာ ရခြေိုးပေါငျဒါမှုနျ့ ဒါမှမဟုတျ ရခြေိုးဆီ ထညျ့ပေးခွငျးအားဖွငျ့ စိတျနဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို အနားရစပေါတယျ။ ဆေးပညာကုထုံးဂြာနယျရဲ့ လလေ့ာမှုအရ ဆိုရရငျ စိတျပူပငျသောက မြားနသေူတှဟော နစေ့ဉျ ကွကျသီးနှေးရထေဲမှာ စိမျပွီး ခြိုးခဲ့မယျဆိုရငျ ရှဈပတျကွာတဲ့အခါ ရရှိလာမဲ့ အာနိသငျကတော့ ဆရာဝနျတို့ ညှနျကွားတဲ့ဆေးတှေ သောကျခွငျးထကျ ပိုမိုတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးကို ရရှိနိုငျတယျ ဆိုတာပါပဲ။
သငျ့အရပွေးတှဟော ခွောကျသှပွေီ့း နှမျးညဈညဈ ဖွဈနတေယျ ဒါမှမဟုတျ ယားယံမှုတှေ ဖွဈနခေဲ့တယျဆိုရငျ သငျခြိုးမဲ့ ရထေဲမှာ ဂြုံမှုနျ့အနညျးငယျ ထညျ့ပွီး ခြိုးပေးပါ။ ယားယံနတေဲ့ အရပွေားကို အနာကကျြစပွေီး အရပွေားခွောကျသှေ့ ညဈနှမျးမှုကနေ ကငျးဝေးစမှော ဖွဈပါတယျ။ ဂြုံမှုနျ့ထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ဓာတျပေါငျးဟာ အနာကကျြစတေဲ့ အာနိသငျရှိပါတယျ။
ဂြုံမှုနျ့ကို သနျ့ရှငျးခွောကျသှတေဲ့ ခွအေိတျထဲထညျ့ပွီး အလုံပိတျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ အဲ့သညျ့အိတျကို ရနှေေး သို့မဟုတျ ရအေေး ထညျ့ထားတဲ့ ရခြေိုးကနျထဲ ထညျ့လိုကျပွီးနောကျမှာ သငျ့ ခန်ဓာကိုယျကို အခြိနျဆယျမိနဈ ဆယျ့ငါးမိနဈ စိမျခြိုးပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
သငျခြိုးစိမျမဲ့ ရကေနျထဲကို မရှိမဖွဈဆီ (Essential oil) ထညျ့ပွီး နောကျမှာ စိမျခြိုးပေးပါ။ မှေးရနံ့ဆီတှကေ မှတျဉာဏျကို တိုးတကျကောငျးမှနျ စနေိုငျပွီး စိတျဖိဆီးမှုတှကေို ပွလြေော့သှားစမှော ဖွဈပါတယျ။
အအေးမိဝဒေနာ မဖွဈစဖေို့ ရကေို ကွကျသီးနှေးအနအေထား ထားရှိပွီး ခြိုးပေးခွငျးအားဖွငျ့
နှာခေါငျးပိတျရောဂါကို သကျသာစေ ပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျ ကိုကျခဲနာကငျြမှုကို လြှော့ပါးစပေါတယျ။
ဒီလို ရခြေိုးရငျးနဲ့ အပနျးဖွတောဟာ ဦးဏှောကျထဲက နာကငျြကိုကျခဲမှု တှကေို လြော့ကစြတေဲ့ အနျဒျေါဖငျဟျောမုနျးကို အထှကျတိုးစလေို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ညဘကျကို ကောငျးမှနျနှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောစဖေို့အတှကျ အိပျယာမဝငျခငျ ညဦးပိုငျးမှာ ကွကျသီးနှေးရလေေးကို ခြိုးပေးဖို့ လိုပါတယျ။ ညဘကျ အဲ့သညျ့လို ရခြေိုးလိုကျတဲ့ အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျဟာ အပူခြိနျလြော့ကသြှားပွီး ခန်ဓာကိုယျကနေ မယျလျတိုနငျလို့ ချေါတဲ့ ဟျောမုနျးတှေ အထှကျတိုးစပေါတယျ။
အိပျယာမဝငျမှီ ရကွေကျသီးနှေး ခြိုးပေးခွငျးကွောငျ့ စိတျနဲ့ခန်ဓာကို လနျးဆနျးအနားရစပွေီး
ကောငျးမှနျနှဈခွိုကျစှာ အိပျမောကသြှား စနေိုငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့တဈနတေ့ာ လှုပျရှားသှားလာ အလုပျမြားမှုတှကွေောငျ့ စိတျရောကိုယျပါ ပငျပနျးနှမျးနယျခွငျးတှေ ဖွဈပျေါနတော အမှနျပါ။ တဈနကေုနျ ပငျပနျးနှမျးနယျနမှေုကို ရစေိမျခြိုးလိုကျတာနဲ့ ဦးနှောကျထဲမှာ စိတျခံစားမှုတှေ ကောငျးမှနျလာပွီး အပနျးပွေ လနျးဆနျးစတေဲ့ ဟျောမုနျးတှေ ထှကျလာတာမို့ သငျ့ကို ကောငျးမှနျစှာ အနားရစမှော ဖွဈပါတယျ။ ရစေိမျခြိုးခွငျးရဲ့ ကောငျးကြိုးမြားကို သိရပွီဆိုတော့ လိုကျလုပျကွညျ့ဖို့က မိမိတာဝနျပဲပေါ့။
”ရေစိမ်ချိုးခြင်းဟာ သင့်ကိုဘယ်လို အကျိုးပေးမယ်ဆိုတာ”
သင်သိပြီးပြီလား? သင်ရေချိုးတဲ့အခါ ရေကိုစိမ်ပြီး ချိုးခဲ့မယ်ဆိုရင် အံသြဖွယ်ကောင်းတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်မယ်ဆိုတာ။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေချိန်မှာ ရေစိမ်ကန်ထဲမှာ ရေစိမ်ချိုးတာဟာ ပင်ပန်းမှုကို ပြေလျော့စေပြီး စိတ်ကို လန်းဆန်း သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ချိုးမဲ့ရေထဲမှာ ရေချိုးပေါင်ဒါမှုန့် ဒါမှမဟုတ် ရေချိုးဆီ ထည့်ပေးခြင်းအားဖြင့် စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အနားရစေပါတယ်။ ဆေးပညာကုထုံးဂျာနယ်ရဲ့ လေ့လာမှုအရ ဆိုရရင် စိတ်ပူပင်သောက များနေသူတွေဟာ နေ့စဉ် ကြက်သီးနွေးရေထဲမှာ စိမ်ပြီး ချိုးခဲ့မယ်ဆိုရင် ရှစ်ပတ်ကြာတဲ့အခါ ရရှိလာမဲ့ အာနိသင်ကတော့ ဆရာဝန်တို့ ညွှန်ကြားတဲ့ဆေးတွေ သောက်ခြင်းထက် ပိုမိုတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
သင့်အရေပြးတွေဟာ ခြောက်သွေ့ပြီး နွမ်းညစ်ညစ် ဖြစ်နေတယ် ဒါမှမဟုတ် ယားယံမှုတွေ ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်ချိုးမဲ့ ရေထဲမှာ ဂျုံမှုန့်အနည်းငယ် ထည့်ပြီး ချိုးပေးပါ။ ယားယံနေတဲ့ အရေပြားကို အနာကျက်စေပြီး အရေပြားခြောက်သွေ့ ညစ်နွမ်းမှုကနေ ကင်းဝေးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျုံမှုန့်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းဟာ အနာကျက်စေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။
ဂျုံမှုန့်ကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ခြေအိတ်ထဲထည့်ပြီး အလုံပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲ့သည့်အိတ်ကို ရေနွေး သို့မဟုတ် ရေအေး ထည့်ထားတဲ့ ရေချိုးကန်ထဲ ထည့်လိုက်ပြီးနောက်မှာ သင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အချိန်ဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ် စိမ်ချိုးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ချိုးစိမ်မဲ့ ရေကန်ထဲကို မရှိမဖြစ်ဆီ (Essential oil) ထည့်ပြီး နောက်မှာ စိမ်ချိုးပေးပါ။ မွှေးရနံ့ဆီတွေက မှတ်ဉာဏ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန် စေနိုင်ပြီး စိတ်ဖိဆီးမှုတွေကို ပြေလျော့သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အအေးမိဝေဒနာ မဖြစ်စေဖို့ ရေကို ကြက်သီးနွေးအနေအထား ထားရှိပြီး ချိုးပေးခြင်းအားဖြင့်
နှာခေါင်းပိတ်ရောဂါကို သက်သာစေ ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ကိုက်ခဲနာကျင်မှုကို လျှော့ပါးစေပါတယ်။
ဒီလို ရေချိုးရင်းနဲ့ အပန်းဖြေတာဟာ ဦးဏှောက်ထဲက နာကျင်ကိုက်ခဲမှု တွေကို လျော့ကျစေတဲ့ အန်ဒေါ်ဖင်ဟော်မုန်းကို အထွက်တိုးစေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ညဘက်ကို ကောင်းမွန်နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေဖို့အတွက် အိပ်ယာမဝင်ခင် ညဦးပိုင်းမှာ ကြက်သီးနွေးရေလေးကို ချိုးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ညဘက် အဲ့သည့်လို ရေချိုးလိုက်တဲ့ အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အပူချိန်လျော့ကျသွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကနေ မယ်လ်တိုနင်လို့ ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေ အထွက်တိုးစေပါတယ်။
အိပ်ယာမဝင်မှီ ရေကြက်သီးနွေး ချိုးပေးခြင်းကြောင့် စိတ်နဲ့ခန္ဓာကို လန်းဆန်းအနားရစေပြီး
ကောင်းမွန်နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျသွား စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားသွားလာ အလုပ်များမှုတွေကြောင့် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာ အမှန်ပါ။ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေမှုကို ရေစိမ်ချိုးလိုက်တာနဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ စိတ်ခံစားမှုတွေ ကောင်းမွန်လာပြီး အပန်းပြေ လန်းဆန်းစေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထွက်လာတာမို့ သင့်ကို ကောင်းမွန်စွာ အနားရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေစိမ်ချိုးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများကို သိရပြီဆိုတော့ လိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့က မိမိတာဝန်ပဲပေါ့။